Offal संग के गर्ने | सबैको लागी उपयोगी जानकारी
प्रकाशित 02.10.2021 02.10.2021
Offal संग के गर्ने
К अफल कलेजो, मिर्गौला, जिब्रो, मुटु, फोक्सो, मस्तिष्क, udders, पेट, दाग, आदि काँचो कलेजो चिसो मा भण्डार गरिएको छ, पहिले सूरजमुखी तेल संग लुब्रिकेटेड गरीएको छ।
कलेजो को स्वाद सुधार गर्न को लागी, यो तताउनु अघि १ मिनेट को लागी उबलते पानी मा डुबाईन्छ, त्यसपछि चिसो पानी मा धोईन्छ र सुकाइन्छ।
तपाइँको जिगर कसरी तयार गर्ने
कलेजो को स्वाद पनि सुधार हुन्छ यदि यो चिसो दूध मा भिजाउनु भन्दा २ घण्टा पहिले भिजेको छ। कुनै पनि हालत मा यो उत्पादन overcook वा overcook गर्नु हुँदैन।
यस अवस्थामा, यो कडा र स्वादहीन हुन्छ। कलेजो, सबै भन्दा राम्रो भुटेको अनसाल्टेड।
कसरी अफल पकाउने
मृगौला धेरै पानीमा उमालेको छ। यो तपाइँ उनीहरु बाट एक अप्रिय गंध संग पदार्थ निकाल्ने अनुमति दिन्छ। गाईको मासु र सुंगुरको मिर्गौला एकातिर काटिन्छ, चिसो पानी मा ३ घण्टा सम्म भिजाएर, त्यसपछि पानी को एक नयाँ भाग मा भिजाएर, एक फोडा ल्याईयो, निकालीयो, त्यसपछि १-१.५ घन्टा को लागी फेरि उमालेर, त्यसपछि चिसो पानी मा धोईयो । मासुको मिर्गौला उमालेको पछि, उच्च गर्मी मा भुटेको छ।
भालु र भेडाको मृगौला भिजाउन आवश्यक छैन। समाप्त कलियों काटिएको मा रातो हुनु हुँदैन। एक ठुलो ठाउँ मा एक सील कंटेनर मा स्टोर, शोरबा बाट हटाउनुहोस्।
जिब्रो उबलते पानी मा राखिएको छ, कम गर्मी मा3घण्टा सम्म उबलाएर र त्यसपछि चिसो पानी मा स्थानान्तरण गरीन्छ र छाला तुरुन्तै यो बाट हटाइन्छ। चिसो मा एक उबलाएको जिब्रो एक बन्द कंटेनर मा भण्डार गर्नुहोस्।
दिमाग पहिले १ घण्टा को लागी चिसो पानी मा भिजेको छ र, यो बाट हटाई बिना, फिल्म अलग गर्नुहोस्। खाना पकाउन को लागी, दिमाग एक प row्क्ति मा राखिएको छ, चिसो पानी संग खन्याइएको छ, उत्पादन को 1 किलो प्रति जोडिएको छ, एक 1% सिरका समाधान को 30 ग्राम, नुन को3ग्राम, काली मिर्च को 10 जी! र बे पत्ती को0ग्राम।
मस्तिष्क एक कम फोडा संग एक बन्द कंटेनर मा उबलाएको छ। गहिरो फ्राई हुनु भन्दा पहिले, मस्तिष्क कोमल सम्म उमालेको छ, त्यसपछि चिसो, सुकेको र आटा र अण्डा मा रोटी।
खाना पकाउनु अघि, मुटु २ घण्टा सम्म चिसो पानी मा भिजेको छ। थर्डको खट्टा स्वाद हटाउनुहोस्, यसलाई टुक्रामा काट्नुहोस्, चिसो पानीमा2घण्टा भिजाउनुहोस्, पानी २ पटक बदल्नुहोस्। फोक्सो एक बन्द ढक्कन संग एक कन्टेनर मा5घण्टा सम्म उबलाएको छ। चिसो पानी संग भालु खुट्टा डालो र कम फोडा मा ३-३, ५ घण्टा को लागी पकाउनुहोस्।
नुन थपिएको छ; खाना पकाउने को अन्त्यमा। तिनीहरूलाई चिसो नमकीन पानी वा शोरबामा भण्डार गर्नुहोस्। दाग पहिले cold घण्टाको लागी चिसो पानी मा भिजेको छ, प्रत्येक २ घन्टा मा पानी बदल्दै, त्यसपछि कम फोडा मा ५ घण्टा सम्म उमालेको। समाप्त उत्पादन एक ठुलो ठाउँ मा भण्डारण गरीन्छ, शोरबा बाट हटाईन्छ।
बेक्ड जीभ: आलुको साथ चुलोमा
भेडाको मिर्गौला कसरी पकाउने? तस्विरको साथ कदम नुसार विधि
सुंगुर मिर्गौला - नुस्खा
विधि - एप्पल र प्याजको साथ फ्राइड टर्की लिभर
पछिल्लो लौंग संग ककटेल
अर्को कसरत को बीच कती समय बिताउने
82 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,748 प्रश्नहरू।